mini-plant manodina menaka solika 2
"Design Bureau Klimova" - sehatra "PROMETHEUS" mba hahazoana solika avy amin'ny karazan-tsakafo sy fako isan-karazany
Ho an'ireo tsy te hividy solika sarobidy
Teknolojian'ny Biraon'ny klimov
DEMONSTRATION BUREAU OF BUREAU
DEPARTMENT OF CONSULTATIONS amin'ny mini-factories
Lisitry ny vidin'ny PROMETHEUS-FARMER
Fitrandrahana solika, solika ary entona handoavana ny fiaranao dia mahazo ny toeram-pamokarana "PROMETHEUS" Klimov. Avy amin'ny fantsona matanjaka: ny fako an-tanana, ny arina, ny tavy, ny fako. Avy amin'ny fantsom-bokatra manimba: solika, mazut, alim-bilia, solika matevina. Ny orinasa madinidinika dia mamolavola zava-baovao nandritra ny taonjato maro: mitady mpivarotra any amin'ny firenena rehetra manerana izao tontolo izao izahay. Ataovy madio sy mahomby ny planetanao.
Fantatsika fa: ny pyrolysis dia mitrandraka, manaparitaka ireo zavamaniry isan-karazany, manasitrana fikarakarana fidiovana ho an'ny fiompiana, famokarana solika mavesatra, fandroana fandoroana, zavamaniry fanodinana volom-borona, angom-pihariana, fantsom-bary fitrandrahana solika, tobim-pyrolysis solika, desalinators of sea water.
Ny iraka avy amin'ny Birao momba ny fandefasana an'i Klimov amin'ny alalan'ny fanodinana solika
OOO Klimova Design Bureau (INN 4205312946 Rosia, Kemerovo, www.potram.ru) dia manamboatra ny orinasa sy ny orinasa mikirakira ny foto-pisainan'ny "kely na lehibe". Ny fototry ny tetikasa rehetra dia ny fizarana "KID". Fizarana "BABY" - dia singa miavaka amin'ny fametrahana fepetra voafaritra manokana amin'ny fomba fiasa ara-teknolojika iray, LEGO biriky iray. Ny dingana ara-teknolojika novolavolaina, manana vondron'orinasa iraisana izahay, izay misy fivontran-tsakafo madinika "PROMETHEUS". Ny mini-plant dia manatanteraka fizika teknolojika manokana, amin'ny ankapobeny, dingana fototra iray. Avy amin'ny zavamaniry bitika "PROMETHEUS" no namorona ny famokarana "POTRAM". Complexes «POTRAM» - famokarana lehibe, novokarina tamina endrika mahazatra. Ny tanjon'ny "POTRAM" sarotra dia ny mahazo ny vokatra ara-barotra nomena avy amin'ny fitaovana manokana. Ny fampivoarana ny fahaiza-manaon'ny famokarana POTRAM dia natao noho ny fampidirana ny famokarana famokarana "MINO" ao amin'ny orinasa indostrialy. Ny zavamaniry "PROMETHEUS" dia natao ho an'ny fanabeazana nomena, ho toy ny safidy: ho an'ny fitaovam-pako (fako, tranom-bary, siramamy) ary ho an'ny vokatra farany (coke, solika ary grefy, herinaratra).
Hatramin'ny halehibeny fototra amin'ny fizarana "TOT" dia voafidy amin'ny fomba toy izany mba hahafahana mandefa azy any amin'ny tranokalan'ny fivarotana PROMETHEUS na ny orinasa POTRAM amin'ny fampiasana ny seranan-tsambo iraisam-pirenena sy ny lalamby. Izany no mahatonga ireo orinasa sy orinasa mametraka zavatra haingana manerana ny tany manerana izao tontolo izao.
Ny birao famolavolana Klimova dia manangana haingana dia haorina ireo orinasa eo ambanin'ny sehatry ny tetikasa "PROMETHEUS". Ny tetikasa "PROMETHEUS" dia ny fampandrosoana ny tetibolam-pitrandrahana bitrochemical avy amina tonnage hatramin'ny famokarana lehibe.
FANOMBANANA PRICE ho an'ny orinasa fitsaboana fako
PRICE-LIST ho an'ny fanadiovana solika sy ravinkazo kely
PRICE-LIST ho an'ny solika amin'ny famoahana solika solika ao anaty gazy solika
FANAZAVANA FANAMPIANA ho an'ny zavamaniry ho an'ny famerenana ny menaka nampiasaina amin'ny solika
PYROLYSIS INSTALLATIONS SY NY FAMPANDROSOANA TANJONA "KB KLIMOVA"
Fametrahana ny pyrolysis amin'ny fako "FERMER".
Modular Moussoro-refineries "PROMETEY-FERMER".
Sary hosodoko "PROMETEY-FERMER".
FIZARANA lasa etona,
Mini-refineries "KB KLIMOVA"
Fanaporofoana ny fitaovan'ny solika "KI-1 electro",
Kitapom-bary fanadiovana kely "Tiny" ho an'ny fandraisana solika sy fanangonam-bokatra (code105).
Ny fakan-tsary fanalefahana modely "Starlet-1" ho an'ny famaritana ny atmosfera misy ranon-javatra misy solika (code201).
Sakana amin'ny fanadiovana vaksin-tsakafo
orinasa famoretana HEAVY OIL PRODUCTS "KB KLIMOVA"
orinasa FOR PURCHASING NOSITILININA "KB KLIMOVA"
indostrialy menaka fototra Klimov Design Bureau "Prometheus-SOLIKA"
Plant Prometheus-OM noho ny fahaterahana indray ny menaka nampiasaina maotera.
FAMPIANARANA "PROMETHEUS-M" mba hahazoana solika fototra avy amin'ny menaka solika.
Fisakanana ny fako ao an-trano "Butovka"